Ukhilimu we-Zucchini no-apula, ukuqala okumnandi | Ukupheka Kwekhishi
UMontse Morote | | Isitolo sezibiliboco, Okufakiwe Okushisayo
Ukhilimu we-Zucchini ne-apula, zilungele lezi zinsuku ezibandayo, ngoba manje ziyathandeka kakhulu.
Amakhrim ayasiza kakhulu, alula ukuwalungisa futhi asheshe, angadliwa ebanda noma ashisayo, kepha ngalesi sikhathi sizizwa sifudumele. Kuhle ukuqala ukudla.
Futhi lokhu i-zucchini ne-apula ukhilimu uphilile kakhulu nangokuthinta okwehlukile, i-apula liyinika ukunambitheka okuncane okumnandi. Angikuthandi ukuqhathanisa, ukufaka uswidi ekudleni okunosawoti kunzima kimi, kepha kufanele ngithi uma ngizama lo khilimu ngiwuthole ucebe kakhulu, ngawuthanda futhi uyindlela enhle yokudla imifino nezithelo , inhlanganisela ephelele.
Okhilimu balungele unyaka wonke, ngisho nangamaholide njengesiqalo njengoba zithambile futhi zilula.
Uhlobo lweresiphi: Amakhandlela
Ukulungiselela ukhilimu we-zucchini ne-apula, sizoqala ngokuxebula i-zucchini, amazambane nama-apula.
Sifaka i-casserole ngamanzi ukushisa ngosawoti omncane, sisika i-zucchini ibe yizicucu, amazambane nama-apula abe yizicucu bese siyifaka ku-casserole. Sifaka usawoti omncane nopelepele. Siyivumela ipheke cishe imizuzu engama-20.
Lapho sibona ukuthi konke sekucishe kuphekiwe, sinquma ushizi sibe yizicucu bese sengeza ku-casserole. Siyaxuba bese sivumela ukupheka eminye imizuzu emi-5.
Sichoboza zonke izithako, sinambitha usawoti futhi siyalungisa. Uma uthanda ukhilimu omuhle kakhulu ungadlula kumaShayina.
Khonza ufudumele kakhulu, ungaphakelwa ngezicucu ze-apula ngezicucu ezincane kakhulu.
Futhi isilungele ukudla. Kumnandi !!!
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » Isitolo sezibiliboco » I-zucchini ne-apula ukhilimu
Izinkomishi zoyogathi, ubhanana, i-apula noju